Ukukhulisa Ukuguqulwa ngokusebenzisa ifaneli Yezentengiso Yezenhlalo | Martech Zone
Ukukhulisa Ukuguqulwa ngeSmele Yezentengiso Yezenhlalo
ULwesihlanu, July 25, 2014 NgoLwesithathu, Agasti 30, 2017 Douglas Karr
Le infographic emangalisayo exhaswe yiTollFreeForwarding ihamba ngebhizinisi elijwayelekile noma umakethi ngokusebenzisa okhiye abangu-6 bokufeza ukushayela ukuthengisa ngezokuxhumana: Ukuqwashisa, Inzalo, Ukuguqulwa, Ukuthengisa, Ukuthembeka kanye Nokumela.
Imingcele yokuthengisa isetshenzisiwe emhlabeni wokumaketha ngoba inikeza indlela yokwenza lula futhi ibone ngeso lengqondo indlela yekhasimende kusukela ekuqaleni kuya esenzweni sokugcina. Ngokwesiko lokhu kwakusho ukusuka endaweni yokuqala yokwazisa kuze kufike ekuthengisweni, kepha emhlabeni wanamuhla wezenhlalo, kudlulela phambili kakhulu kunalokho. UJodi Parker
Ama-77% abathengi abaku-inthanethi babheka izilinganiso nezibuyekezo ngaphambi kokuthenga kanti u-80% wamakhasimende alindele ukuthi amabhizinisi asebenze ezinkundleni zokuxhumana
Imithombo yezokuxhumana ingumphakathi ongekho omunye lapho ungenawo nje ithuba lokuthengisa, unethuba lokuthi amakhasimende akho athengise egameni lakho! Nginesiqiniseko sokuthi uma ungena ngemvume kunoma iyiphi inkundla yezokuxhumana namuhla, uzothola abantu abafuna imikhiqizo noma izinsizakalo zakho. Ingabe ukhona lapho bebuza? Ingabe amakhasimende akho akhona futhi ajabule kakhulu ngawe ukuthi ayaphendula?
Nayi i-infographic ebeka ukubuka konke okuhle kwe- Umsele Wokuguqulwa Kwezenhlalo:
Tags: ifaneli yokuguqula imithombo yezokuxhumanaukuguqulwa kwemithombo yezokuxhumanaukunakekelwa kwezokuxhumanaifaneli yokuthengisa yezokuxhumana
Izinyathelo Ezi-9 Zokuhlela Umkhankaso Wakho Olandelayo Wokukhangisa Komphakathi